विराट कोहली एकदिवसीयका एक नम्बर ब्याट्सम्यान
एजेन्सी, भदौ ३ -
भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ‘आइसिसि ओडिआइ’ र्‍याङकिङको एक नम्बरमा परेका छन्। शुक्रबार जारी भएको वन डे इन्टरनेशनलको सूचीमा ८७३ को रेटिङसहित विराट शीर्षस्थानमा परेका हुन्।दोस्रो नम्बरमा अस्ट्रेलियाका डेभिड वार्नर छन्। विराट र वार्नरबीच १२ अंक मात्र फरक छ। यो दुरी बढाउन विराटले आइतबार हुने एकदिवसीय खेल श्रृंखलामा राम्रो मौका पाउने विश्लेषकहरुको भनाइ छ।
पोखरामा मंगलबारदेखि तीज गीत र भलिबल प्रतियोगिता
पोखरा, भदौ ३ -
हरितालिका तीजका अवसरमा बागमारा युवा संगम समूह, कास्कीको आयोजनामा मङ्गलबारदेखि खुला तीज गीत एवं भलिबल प्रतियोगिता हुने भएको छ ।
गौरीकाद्वारा सहभागी भएको सबै विधामा स्वर्ण, ५ नयाँ कीर्तिमान
अनिश रेग्मी, काठमाडौं, भदौ २ - ओलम्पियन गौरिका सिंहले २० औं राष्ट्रिय पौडी च्याम्पियनसिपको अन्तिम दिन तीन नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमानसहित ६ स्वर्ण बनाउँदै सर्वाधिक स्वर्ण जित्ने खेलाडी बनेकी छिन्। ललितपुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसरको पौडी पोखरीमा शुक्रबार भएको खेलमा उनले प्रति...
६ स्वर्ण जितेकी गौरीकाका १२ तस्बिर
अनिश रेग्मी, काठमाडौं, भदौ २ -
कान्छी ओलम्पियन गौरीका सिंहले राष्ट्रिय पौडी प्रतियोगिताको २० औं संस्करणको दोस्रो दिन शुक्रबार थप तीन कीर्तिमान कायम राखेकी छन्। ललितपुरको सातदोबाटोस्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा भएको प्रतियोगितामा उनले ५० र १०० मिटर फ्रिस्टाइलको छुट्टाछट्टै प्रतिस्पर्धामा कीर्तिमान बनाएकी हुन्।
यी खेलाडीले किन खोपाए विश्व नक्सामा रातो तारा भएको ट्याटु?
एजेन्सी, भदौ २ -
खेलाडीमाझ ट्याटु निकै लोकप्रिय छ। फुटबल, क्रिकेटका लोकप्रिय खेलाडीको ट्याटुले बेलाबेला चर्चा पाइरहन्छ। ट्याटु खोपाउने खेलाडीमध्येका केभिन पिटरसनको ट्याटुको चर्चा भने बेग्लै छ।
बार्सिलोनाका लागि नेइमारको बिकल्प को हुनसक्छ, यस्तो छ मेसीको सुझाव
काठमाडौं, भदौ २ (एजेन्सी) -
स्पेनिस सुपर कपमा चिरपरिचित रियल मड्रिडसँग समग्रमा ५–१ गोल अन्तरको लज्जास्पद हारपछि बार्सिलोनामा नेइमारको अभाव खट्किएको छ। बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेसीले नेइमारको ठाउँमा आउनसक्ने सम्भावित खेलाडीका बारेमा प्रशिक्षक अर्नेस्टो वेलवेर्डेसँग सल्लाह गरेका छन्।
बार्सिलोनालाई हराउँदै रोनाल्डो बिनै उत्रिएको रियल मड्रिडले उपाधि जित्यो
मड्रिड, भदौ १ (एजेन्सी)– -
बार्सिलोनालाई हराउँदै स्पेनिस सुपर कप फुटबलको उपाधि रियल मड्रिडले जितेको छ। सुपर कपको दोस्रो लेग अन्तर्गत बुधबार राति भएको एल क्लासिकोमा बार्सिलोनालाई २–० ले हराउँदै समग्रमा ५–१ को जितसहित रियल मड्रिडले उपाधिमाथि बक्जा जमाएको हो।
खेल्दाखेल्दै बलले लागेर पाकिस्तानी क्रिकेटरको मृत्यु
कराची, भदौ १ -
पाकिस्तानका एक क्रिकेटरको बलले लागेर मृत्यु भएको छ। पाकिस्तानको मार्दनमा क्लब क्रिकेट म्याचको क्रममा हेलमेट नलाइ ब्याटिङ गरिरहेका क्रिकेटर जुबेर अहमदको बलले लागेर मृत्यु भएको हो।
झापामा मिडिया कप हुँदै
सेतोपाटी संवाददाता, झापा, साउन ३२ -
झापामा पहिलो पटक सञ्चार गृहले मिडिया कप फुटबलको आयोजना गर्ने भएको छ। बिर्तामोडबाट प्रकाशित विवेचना दैनिकले रजत वर्षको उपलक्ष्यमा जिल्ला स्तरीय मिडिया कप फुटबलको आयोजना गर्न लागेको हो।
प्रेमी विराटलाई भेट्न श्रीलंका पुगिन् अनुष्का!
कोलम्बो, साउन ३२ (एजेन्सी) -
बलिउड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा आफ्नो प्रेमी क्रिकेटर विराट कोहलीलाई भेट्न श्रीलंका पुगेकी छन्।
वन डे सिरिजको लागि श्रीलंकाको क्यान्डी शहर पुगेको टीम इन्डियका कप्तान कोहलीलाई भेट्न उनी श्रीलंका पुगेकी हुन्।
ए डिभिजन लिग मंसिर १४ बाट गर्ने एन्फाको निर्णय
काठमाडौं, साउन ३२ (सेतोपाटी) -
आगामी मंसिर १४ गतेदेखि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले ए डिभिजन लिग गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको एन्फा बोर्डको बैठकले ए डिभिजन लिगको मिति तय गरेको हो ।
रेफ्रि धकेलेका रोनाल्डोमाथि ५ खेलको प्रतिबन्ध (भिडियोसहित)
म्याड्रिड, साउन ३१ (एजेन्सी) -
आइतबार राती स्पेनिस सुपर कपको पहिलो लेगको खेलमा रातो कार्ड पाएपछि रोनाल्डोले रेफ्रिलाई धकेलेका थिए। उनलाई दुई वटा पहेँलो कार्डका लागि एक खेल प्रतिबन्ध निश्चित थियो। तर, रेफ्रिलाई धकेलेको आरोपमा उनीमाथि थप ४ खेलको प्रतिबन्ध तोकिएको हो।
नेइमारको डेब्यु खेल १ सय ८३ देशमा सिधा प्रसारण
पेरिस, साउन ३१ (एजेन्सी) -
उनले गुइनगाम्पविरुद्ध डेब्यु खेलमा गोल गर्नुका साथै गोलका लागि पास पनि मिलाएका थिए। उनको खेल १ सय ८३ देशमा सिधा प्रसारण भएको थियो। नेइमारले ८२ मिनेटमा इडिन्सन काभानीको पासमा गोल गर्नुको साथै ६२ मिनेटमा काभानीलाई गोलका लागि अवसर मिलाइदिएका थिए।
युवराज सिंह भारतीय टिमबाट बाहिर
नयाँ दिल्ली, साउन ३१ (एजेन्सी) -
श्रीलंकाविरुद्ध टेस्ट शृंखलामा वाइटवास गरेपछि भारतले ५ एकदिवसीय शृंखलाका लागि टोलीको छनोट गरेको छ। जसमा युवराज सिंह भारतको एकदिवसीय टिमबाट बाहिरिएका छन्। उनको स्थानमा कर्नाटकका मनिष पाण्डेले टिममा समावेश हुने मौका पाएका छन्।
२० वर्षीय जर्मनी खेलाडीबाट फेडरर स्तब्ध
मोन्ट्रियल, साउन ३१ (एजेन्सी) - जर्मनीका २० वर्पीया अलेक्सान्द्रो ज्वेरेवले टेनिस स्टार रोजर फेडररलाई पराजित गरेका छन्। अलेसान्द्रोले रोजर्स कप टेनिस प्रतियोगिताको फाइनलमा स्विट्जरल्यान्डका ३६ वर्षीय स्टारलाई पराजित गरेका हुन्। जर्मनीका युवा खेलाडीको वर्षको यो पाँचौ उपाधि हो। विश्व...
भारतद्वारा विदेशी भूमिमा पहिलो वाइटवासको कीर्तिमान
गाले, साउन ३० (एजेन्सी) -
भारतले विदेशी भूमिमा टेस्ट शृंखला वाइटवास गर्ने इतिहास रचेको छ। श्रीलंकाविरुद्ध तेस्रो तथा अन्तिम टेस्ट शृंखला इनिङ र १ सय ७१ रनले जितेपछि भारतले इतिहास रचेको हो।
कार्डिफ, जेठ २१ (एजेन्सी) -
कार्डिफ, जेठ २० (एजेन्सी) - अतिरिक्त खेलाडीको रुपमा मैदान प्रवेश गरेका मार्को असेन्सियोले रियल म्याड्रिडका लागि चौथो गोल गरेका छन्। इस्कोको स्थानमा ८२ मिनेटमा मैदान प्रवेश गरेका असेन्सियोले ९० मिनेटमा गोल गरेका थिए। उनको गोलसँगै रियलले ४–१ को अग्रता लिएको छ। अतिरिक्त ४ मि...
कार्डिफ, जेठ २० (एजेन्सी) - युभेन्ट्सले ८३ मिनेटमा एउटा खेलाडी गुमाउन पुगेको छ। ३–१ ले पछाडि परेको युभेन्ट्सका जुआन कुआर्डाडो दोस्रो पहेँलो कार्ड पाएर मैदानबाट बाहिरिएका छन्। रियल म्याड्रिडका डिफेन्डर सर्जियो रामोसलाई हातले ढकेलेको आरोपमा उनलाई रेफ्रिले दोस्रो पहेँलो कार्...
कार्डिफ, जेठ २० (एजेन्सी) -
कार्डिफ, जेठ २० (एजेन्सी) - कासिमेरोले रियल म्याड्रिडलाई पुनः गोलको अग्रता दिलाएका छन्। उनले ६१ मिनेटमा २५ यार्ड टाढाबाट हानेको बल युभेन्ट्सका सामी खेदिराको खुट्टामा लागेर गोल भएको थियो। यो गोलसँगै रियलले कार्डिफमा भइरहेको फाइनलमा २–१ को अग्रता लिएको छ।
रियल र युभेन्ट्सबीचको खेल रोमाञ्चक मोडमा, पहिलो हाफमा १–१ गोल
क्लब फुटबलको सबैभन्दा प्रतिष्ठित प्रतियागिता च्याम्पियन्स लिगको फाइनलअन्तर्गत हाल वेल्सको कार्डिफमा भइरहेको खेलको पहिलो हाफ १–१ गोलको बराबरीमा रोकिएको छ।
७ मिनेटमै युभेन्ट्सले फर्कायो गोल
कार्डिफ, जेठ २० (एजेन्सी) - रियल म्याड्रिड र युभेन्ट्सबीचको खेल रोचक मोडमा पुगेको छ। रियलले २० मिनेटमा हानेको गोल ७ मिनेटपछि नै युभेन्ट्सले फर्काएको छ। युभेन्ट्सका लागि २७ मिनेटमा मारियो मान्डजुकिकले गोल फर्काएका छन्। रियलका लागि पहिलो गोल रोनाल्डोले गरेका थिए। हाल २७ मिनेटको ख...
रोनाल्डोले हाने पहिलो गोल
कार्डिफ, जेठ २० (एजेन्सी) - क्रिस्टियानो रोनाल्डोले च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा रियल म्याड्रिडलाई पहिलो गोलको सफलता दिलाएका छन्। उनले २० मिनेटमा डानी कार्भाहलको ओभरल्यापिङ क्रसमा गोल गरे।
बुफोन अर्को इतिहास नजिक
युभेन्ट्सका गोलकिपर जियानलुइगी बुफोन च्याम्पियन्स लिगमा अर्को कीर्तिमानको नजिक पुगेका छन्। उनी रियल म्याड्रिडविरुद्ध फाइनल खेल जितेर सबैभन्दा पाको उमेरमा च्याम्पियन्स लिग जित्ने इतिहास नजिक छन्।
वेलको ठाउँमा इस्को मैदानमा उत्रिने
आफ्नै देशमा हुन लागेको च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा वेल्स स्ट्राइकर गारेथ वेललाई प्लेइङ इलेभेनमा रियल म्याड्रिडका प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानले स्थान दिएका छैनन्।
वेष्ट इन्डिज क्रिकेटले ९१ वर्ष पुरानो नाम फेर्यो
पोर्ट अफ स्पेन, जेठ २० (एजेन्सी) -
मुख्य कार्यकारी अधिकृत जोन ग्रेब्सका अनुसार वेष्ट इन्डिज टिममा धेरै अंशधार भएका कारण उनीहरुसँग सहजताका साथ मिलेर काम गर्न नयाँ योजना अगाडि सारिएको हो। अब वेष्ट इन्डिजको सबै टापुमा क्रिकेटको एउटै नियम र प्रणाली लागु गरिने उनले बताए। उनले २०१८ देखि २०२३ सम्मको पञ्च वर्षिय योजना सार्वजनिक गर्ने बताए।
म्याराडोनाको चर्चित ‘ह्याण्ड अफ गड’ गोलका लाइन्सम्यान रहेनन्
सोफिया, जेठ २० (एजेन्सी) - अर्जेन्टिनाका महान फुटबल खेलाडी डिएगो म्याराडोनालाई चर्चित बनाउने बुल्गेरियाली लाइन्सम्यान बोगदान दोचेवको ८० वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। सन् १९८६ को विश्व कपमा म्याराडोनाले इङ्ल्यान्डविरुद्ध क्वाटरफाइनलमा अविस्मरणीय ‘ह्याण्ड अफ गड’ उपनामले...